A nwalere Seychelles site na nri pụrụ iche maka Goût de France
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » A nwalere Seychelles site na nri pụrụ iche maka Goût de France
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Seychelles nwalere Goût de France
Onye nnọchi anya France na Seychelles, Onye isi ala Dominique Mas, akpọla ndị obodo Seychelles na ndị ọbịa na Seychelles ka ha sonye n'ememe mmemme mmemme mba ụwa Goût de France/Good France nke a ga -eme site na Ọktọba 14 ruo Ọktọba 22, 2021.
A ga -eme mmemme na mmemme ahụ na -aga nke ọma na mbipụta gara aga nke ihe omume Goût de France n'ụwa niile.
N'afọ a, ọ ga-ewepụta mpaghara Valley-Loire Valley Region ka ọ na-egosipụta echiche nke gastronomy gburugburu ebe obibi.
Gout de France ka bụ ihe omume kacha mkpa n'ụwa niile maka nri French ma bụrụ ụtụ nye ndị osi nri niile.
Edere akwụkwọ ịkpọ oku a na nnọkọ mkparịta ụka sitere na ebe obibi ndị France na La Misère n'ihu Onye isi Director nke ịre ahịa ebe. Njem nleta Seychelles Ngalaba, Oriakụ Bernadette Willemin. Ndị osi nri na -anọchite anya ụfọdụ ụlọ ọrụ mmekọ na mbipụta Goût de France n'afọ a nọkwa na mbido mmemme a.
N'ịgba mmemme a, Onye isi ala Dominique Mas mere ka ọ pụta ìhè na mmemme a ga-ewulite na ihe ịga nke ọma nke mbipụta gara aga nke ihe omume Goût de France n'ụwa niile, nke afọ a ga-egosi mpaghara mpaghara-Loire Valley Region ka ha na-egosipụta echiche nke gastronomy gburugburu ebe obibi. .
Onye nnochite anya Mas kwuru, "Mgbe afọ ndị a siri ike mgbe nsogbu ịdị ọcha na akụ na ụba mebiri mmekọrịta mmekọrịta anyị, enwere m obi anụrị isoro ndị enyi Seychelles na ndị ọbịa mba niile nke agwaetiti mee mmemme mmemme nri French anyị." Ọ gbakwụnyere, "Gout de France ka bụ ihe omume kacha mkpa n'ụwa niile maka nri French; mana ọ bụkwa ụtụ nye ndị osi nri niile na ndị otu ndị ọbịa nke tara ahụhụ nke ukwuu n'ọnwa ndị gara aga. ” Onye nnochite anya ahụ wepụtara onwe ya ileta ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ asatọ na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ niile na -atụpụta ndepụta aha na Seychelles. "Amaara m na ọ nwere ike ịdị njọ maka ịdị arọ m, mana achọrọ m isonyere ndị niile hụrụ Seychelles n'anya na iso ha na -eme omenala French na ihe ọhụrụ," ka onye nnọchi anya France kwuru.
Ndị hụrụ gastronomy dị mma gburugburu Seychelles ga-amalite nchọpụta nke nri Center-Loire Valley, nke nwere nnukwu ụtọ sitere na mkpụrụ osisi sitere na mpaghara, na-atụ anya uto nke ezigbo chiiz, mmanya, na Tarte Tatin a ma ama, nke ejiri apụl caramelized mee. ugbu a, otu n'ime nri ụtọ France ama ama nke ukwuu, nke sitere na mpaghara Sologne dị nso na 1880s.
Oriakụ Willemin nabatara mweghachi nke Goût de France na -ekwupụta na inwe ụdị ihe omume a na kalenda Seychelles na -eweghachi ntụkwasị obi obodo ahụ na mgbake nke ụlọ ọrụ njem anyị.
“Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ike inye ndị nnọchi anya gọọmentị France nkwado ma sonye n'ememme Goût de France nke afọ a. Mgbe otu afọ ejighị n'aka, ihe omume dị ka Gout de France na -ebute ọkụ maka ọdịnihu ụlọ ọrụ anyị. Gastronomy, ọkachasị nri mara mma, bụ ihe ụtọ a na -ekerịta ma bụrụkwa akụkụ dị mkpa nke nchọpụta na ahụmịhe nke ebe njedebe, ”Oriakụ Willemin kwuru.
Na -eso ogbako akụkọ a, ndị ọbịa na ndị nta akụkọ ahụ gosipụtara ụdị ụtọ dị iche iche nke a ga -enye ụfọdụ ụlọ nri nke bụ akụkụ nke ihe omume na Seychelles.
A na -echeta Goût de France/Good France na Machị 20 kwa afọ. Ọpụrụiche n'afọ a, a ga -eme emume a n'ọnwa Ọktoba. Ụlọ oriri na ọ hotelsụ followingụ na ụlọ oriri na ọ followingụ followingụ ndị a ga -atụpụta menus setịpụrụ pụrụ iche site na Ọktọba 14 ruo Ọktọba 22, 2021: Club Med Ste Anne, Constance Ephelia, Constance Lemuria, Delplace, l'Escale, Hilton Northolme, Maia na Mango House.